Otú Di na Nwunye Ga-esi Egosi na Ha Hụrụ Ibe Ha n’Anya | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Abua Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Belize Kriol Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kabuverdianu Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mongolian Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Otú Di na Nwunye Ga-esi Egosi na Ha Hụrụ Ibe Ha n’Anya
Ka chi na-abọ, ka ndị di na nwunye na-akwụsịlata igosi ibe ha na ha hụrụ ha n’anya. Ọ bụrụ na ọ bụ ụdị ihe a ka gị na ya na-alụ, ò nwere ihe o mere?
Igosi di gị ma ọ bụ nwunye gị na ị hụrụ ya n’anya bụ ihe dị ezigbo mkpa ga-eme ka alụmdi na nwunye unu bụrụ a kwaa a kwụrụ. Otú ahụ iri ihe oriri na ịṅụ mmiri mgbe mgbe si eme ka ahụ́ gbasie mmadụ ike, ka di ma ọ bụ nwunye ịna-egosi ibe ya na ọ hụrụ ya n’anya mgbe mgbe ga-esi eme ka alụmdi na nwunye ha sie ike ma na-akakwu mma. Ọ bụrụgodi na o teela di na nwunye lụrụ, onye nke ọ bụla n’ime ha ka kwesịrị ịna-eme ka ibe ya ghọta na ọ hụrụ ya n’anya ma jiri ya kpọrọ ihe.
Onye nwere ezigbo ịhụnanya anaghị achọ ọdịmma onwe ya naanị. Ọ na-achọ ime ihe ga-eme onye ọzọ obi ụtọ. N’ihi ya, onye ahụ anaghị egosi di ma ọ bụ nwunye ya na ọ hụrụ ya n’anya naanị mgbe o metụrụ ya n’obi, kama, ọ na-achọpụta mgbe di ma ọ bụ nwunye ya chọrọ ka o gosi ya na ọ hụrụ ya n’anya, gbalịakwa gosi ya.
Ọ bụ ndị nwunye ka ọ dị mkpa ka e gosi na a hụrụ ha n’anya karịa. Di nwere ike ịhụ nwunye ya n’anya nke ukwu. Ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị n’isi ụtụtụ na n’abalị ma ọ bụkwanụ tupu ha enwee mmekọahụ ka ọ na-eme ka ọ mara na ọ hụrụ ya n’anya, o nwere ike isiri nwunye ya ike ikweta na ọ hụrụ ya n’anya n’eziokwu. Ọ ga-aka mma ịna-eme ka nwunye gị mara na ị hụrụ ya n’anya ugboro ugboro n’ụbọchị.
Na-agwa di gị ma ọ bụ nwunye gị na ị hụrụ ya n’anya. Di ma ọ bụ nwunye ịgwa ibe ha okwu ndị dị ka “Ahụrụ m gị n’anya, ị bụ ọ̀ dị m n’obi,” nwere ike ime ka onye nke ọ bụla mara na e ji ya kpọrọ ihe.
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Ọ bụ ihe jupụtara mmadụ n’obi ka ọnụ ya na-ekwu.”​—Matiu 12:34.
Aro: Ọ bụghị naanị n’ọnụ ka ị ga na-agwa di gị ma ọ bụ nwunye gị na ị hụrụ ya n’anya. I nwere ike ide ya n’akwụkwọ, zigara ya ozi n’iimel ma ọ bụkwanụ gị ezigara ya ozi n’ekwentị.
Mee ihe ndị gosiri na ị hụrụ di gị ma ọ bụ nwunye gị n’anya. Ụzọ ọzọ mmadụ nwekwara ike isi gosi na ọ hụrụ di ma ọ bụ nwunye ya n’anya n’eziokwu bụ ịdịda ya aka, ịmụmụrụ ya ọnụ ọchị, ma ọ bụ inye ya onyinye mgbe ụfọdụ. Di nwekwara ike ibutere nwunye ya akpa, mepeere ya ụzọ, nyere ya aka saa efere, saa ákwà ma ọ bụdị sie nri. Ọtụtụ ndị nwunye na-ewere ya na ihe a ndị di ha na-emere ha bụ ụzọ ha si egosi na ha hụrụ ha n’anya n’eziokwu, ọ bụghị naanị iji nyere ha aka.
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Ka anyị hụ . . . n’anya, ọ bụghị [naanị] n’ọnụ ma ọ bụ n’ire, kama n’omume nakwa n’eziokwu.”​—1 Jọn 3:18.
Aro: Na-emeso di gị ma ọ bụ nwunye ihe otú ahụ i si mesoo ya mgbe ahụ unu na-akpa.
Wepụtanụ oge unu ga-eji na-anọrị. Ịwepụta oge naanị unu ga-eji na-anọrị ga-eme ka alụmdi na nwunye unu sikwuo ike, ọ ga-emekwa ka di gị ma ọ bụ nwunye gị mara na gị na ya ịna-anọrị na-atọgbu gị atọgbu. Nke bụ́ eziokwu bụ na iwepụta oge unu ga-eji na-anọrị agaghị adịchara unu mfe, karịchaa ma ọ bụrụ na unu nwere ụmụ ma ọ bụ na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa unu na-eme n’ụbọchị. Ma, unu nwere ike hazie ihe dị mfe naanị unu abụọ nwere ike ịme, dị ka iji ụkwụ gagharịa ebe ụfọdụ.
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Chọpụta ihe ndị ka mkpa.”​—Ndị Filipaị 1:10.
Aro: Ụfọdụ ndị di na nwunye na-anaghị enwecha ohere na-ewepụta mgbede ma ọ bụ ngwụcha izu ụfọdụ ha ji eme mkpapụ.
Mata di gị ma ọ bụ nwunye gị nke ọma. Otú di ma ọ bụ nwunye si achọ ka a na-egosi ya na a hụrụ ya n’anya anaghị abụ otu. Kwuritanụ otú onye nke ọ bụla n’ime unu ga-esi chọọ ka ibe ya na-egosi ya na ọ hụrụ ya n’anya. Kwuritakwanụ ma ò nwere ihe ndị ọzọ ị ga-achọ ka di gị ma ọ bụ nwunye gị meere gị. Gbazie mbọ hụ na i meere di gị ma ọ bụ nwunye gị ihe ndị ahụ. Cheta na igosi di gị ma ọ bụ nwunye gị na ị hụrụ ya n’anya bụ ihe dị ezigbo mkpa ga-eme ka alụmdi na nwunye unu bụrụ a kwaa a kwụrụ.
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Ịhụnanya adịghị . . . achọ ọdịmma nke ya.”​—1 Ndị Kọrịnt 13:​4, 5.
Aro: Kama ịna-agwa di gị ma ọ bụ nwunye gị ka ọ na-egosi gị na ọ hụrụ gị n’anya, jụọ onwe gị, sị: ‘Olee ihe m ga-eme ka di m ma ọ bụ nwunye m hụkwuo m n’anya?’
“M mechara chọpụta na ekwesịghị m ịna-eche naanị gbasara ihe m chọrọ ka di m na-emere m. Kama nke ahụ, m bidoro ịna-egosi na obi dị m ụtọ maka ihe di m na-eme n’ezinụlọ anyị. M chọpụtara na ka m na-egosikwu ya na m hụrụ ya n’anya, ka ọ na-egosikwukwa m na ọ hụrụ m n’anya.”​—Debra na Douglas di ya.
“Anyị na-eburu ihe onye nke ọ bụla n’ime anyị chọrọ n’obi. Dị ka ihe atụ, ọ na-atọgbu di m atọgbu ma m gosi na obi dị m ụtọ maka ihe ndị ọ na-emere m. Ọ na-eme ka ọ mata na ejighị m ya egwu egwu. Obi na-abụkwa m sọ aṅụrị mgbe ọ bụla ọ jụrụ m otú m mere. Ihe a na-eme ka obi sie m ike na o ji m kpọrọ ihe.”​—Flavia na Aron di ya.